अब प्रधानमन्त्री सांसदले होइन जनताले छान्न पाउनुपर्छ सहि कि गलत ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/अब प्रधानमन्त्री सांसदले होइन जनताले छान्न पाउनुपर्छ सहि कि गलत ?
सयाद जनाआन्दोलन तिर हुर्केको भएर होला । त्यो जनआन्दोलनको कोलाहल अनि त्यो बिरोधहरु धेरै मात्रामा सुन्ने गर्थे ।राजतन्त्र मुर्दावाद ,लोक्तन्त्र जिन्दावाद । अनि म सोध्ने गर्थे आमालाइ “आमा आखिर यो सबै के को लागि गरिराको छन ।”
आमको जबाफ ” त अझै सानै छ्स बुझ्दैनस यो सबै ”
अनि मेरो घरी घरि को प्रस्न ले आमाको जबाफ ” यो राज्तन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक नेपाल को लागि गरेको प्रायास हो । त्यो बेला कतिबुजे कति बुजेन तर आज बुझ्दै छु । त्यो आन्दोलन त एउटा राजा फालेर सयौं राजा जन्माउन लाई रहेछ । राजाले देश को बिकाश हैन आज को राजा भनौदा हरुको शासन रोखेका रहेछन ।
आज विश्व यति ठूलो माहारिमा पुगेको बेला हाम्रा नेताहरु देश भन्दा प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष को कुर्सी तिर अगाडी बडि रहेका छ्न । तर सिमापारी अड्किएका लाखौं नेपाली भोक्ले मर्ने लागेका गरिबका आवाज सुन्न आज नेतालाइ फुर्सद छैन ।
यहि हाम्रो देश हो जहाँ प्रधानमन्त्रीको केक अनि रास्ट्रपति सितल निबास बाट बिमानस्थल पुग्दा हेलिकप्टर चार्टर गरिन्छ तर आज नेपाली भोक्भोकै चिउरा चाउचाउ को भरमा खुट्टामा चप्पल पड्काउदै 10- 12 दिन हिडेर घर पुग्नु परेको छ ।
सत्र हजार नेपालिले ज्यानको बलिदान जनाआन्दोलनमा आखिर यहि को लागि दिएका हुन ?
भयो अब अति भयो जनताको बलिदान रगत पसिना माथी रजाइ गर्ने तिमिहरुलाइ छुट छैन ।
हिजो खुट्टामा चप्पल पड्काउदै राजनिती थालेकाहरु आज करोडौं को गाडि चड्ने भयका छन ठुला ठुल घरमा बस्नेभयका छन परिवर्तन त तिनिहरुको जिबनशैलिमा भयको छ । आज देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार मौलाउदै गाको छ चाहे कुनै बिकास निर्माणकार्य होस अनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया। जताततै कमिसनको होडबाजी ।तर जनताको समस्या जिउकातिउ छ ।कयौं सरकार परिवर्तन भय जनताका सपना अनि देश्को समस्या कहिले परिबर्तन भएन । हुनत देशको लागि सरकार चलायपो परिबर्तन हुनेथियो। आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ का लागि सरकार चलाउने ले के गर्थे परिबर्तन । आज कुर्सी हरेक को लागि तानातान भाको छ देश र जनताको लागि हैन आफ्नो स्वार्थ को लागि ।
तसर्थ अब साच्छै देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि जनता पनि होसियार हुनुपर्छ । तिनिहरुको गलत कामप्रती आवाज उठाउन सक्ने हुनुपर्छ । अब भोट पार्टी चिनेर होइन नेता चिनेर दिने गरौ । आखिर जनता त हौ पहिला भरि गालि गर्ने अनि चुनाव तिर तिनका पछि झन्डा बोक्दै हिड्ने अब यो बानिको अन्त्य गर्ने जरुरि छ ।
अब प्रधानमन्त्री सांसदले होइन जनताले छान्नपाउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ। मेरो बिचारमा देश्को मुहार फेर्नु छ भने हाम्रो एकमात्र आशाको केन्द्रबिन्दु , भ्रष्टहरुलाइ नाङ्गो पारेर आगो लगाउन सक्ने, तीन करोड नेपालिको ढुक्ढुकी रबि लामिछाने जस्तो साहासी , निडर लाई प्रधानमन्त्री बनाउन जरुरी छ।
जया बच्चनप्रति अभिनेत्री कंगनाको यस्तो आक्रोश !
कोरोना जित्न आत्मबल चाहिने रहेछ: नेता शाही
जया बच्चन, ऐश्वर्या र आराध्याको कोरोना रिपोर्ट यस्तो आयो